साविकका विश्रामपुर, रमौली बैरिया, हर्दिया, गम्हरिया बिर्ता र सखुअवा धमौरा गाविस समावेश गरेर २०७४ सालमा वृन्दावन नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । यसको पूर्वमा सर्लाहीको बाग्मती नदी, पश्चिममा गुजरा र कटहरिया नगरपालिकाको सिमाना छ भने दक्षिणमा गढीमाई र गरुडा तथा उत्तरमा चन्द्रपुर नगरपालिका पर्दछ । ९ वडा रहेको यो नगरपालिकाको क्षेत्रफल ९५ दशमलव ४ वर्ग किमी छ ।
नगरपालिकाको जनसंख्या ४२ हजार ७३५ छ । बाग्मती, चाँदी, लमाहा, डोरा जस्ता नदी र वनजंगल पर्याप्त रहेको यो नगरपालिकाका अधिंकाश बासिन्दा कृषिमै निर्भर छन् । प्रस्तुत छ, नगर विकास निर्माण, आगामी योजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका रौटहट संवाददाता दीपेश पौडेलले नगर प्रमुख यादवसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं नगर प्रमुख भएर आएपछि यहाँका जनताले महसूस गर्नेगरी भएका विकासका काम के के हुन् ?
साविक पाँच गाविस समावेश भएर बनेको यो नगरपालिका विकासका पूर्वाधारका पछि थियो । तर हामी निर्वाचित भएर आएपछि यस क्षेत्रका नगरवासीसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक, सरसफाइ लगायत क्षेत्रमा काम भएको छ । यसमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । पहिले नगरका बासिन्दाले शौचालय प्रयोग गर्दैनथे । सरसफाइमा निकै पछि रहेका यहाँका बासिन्दालाई शौचालय निर्माण र प्रयोगमा ल्याउनु निकै कठिन चुनौती थियो । तर नगरपालिकाकै सहयोगमा शौचालय निर्माणदेखि खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न सफल भयौं । अहिले नगरपालिकाका ८० प्रतिशतभन्दा बढी बासिन्दाले शौचालय प्रयोग गर्न थालेका छन् । गाउँ गाउँमा पक्की तथा कालोपत्र सडक बनाएका छौं । नभएका स्थानमा पनि निर्माण गर्न थालिएको छ । नगरपालिकाले यहाँका बासिन्दाले प्रत्यक्ष महसूस गर्नेगरी विभिन्न काम गरेको छ । अर्कोतर्फ, वडास्तरबाटै योजना छनोट भएर आउने भएकाले विकासका काममा स्थानीयको संलग्नता रहँदै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा के कस्ता काम भए ?
गतवर्ष पूर्वाधार विकासको कामले गति लिएको छ । मापदण्डको आधारमा सडक फराकिलो बनाइएको छ । विश्रामपुरदेखि हर्षाहसम्मको सडकलाई दुई लेनको फराकिलो र ३०० मिटर कालोपत्र गरिएको छ । साढे ३ किलोमिटर उक्त सडकको कालोपत्र गर्ने योजना छ । ‘एक घर, एक कल’ नीति नगरपालिकाले लिएको छ । प्रत्येक घरलाई खानेपानीको धारा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार काम भइरहेको छ । शिक्षाको सुधारका लागि नगरका प्रत्येक विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारको शिक्षकको व्यवस्था मिलाएका छौं । विद्यालयमा कम्प्युटर उपलब्ध गराउनुका साथै विद्यार्थीको तालीम, भ्रमण लागयत काममा पनि नगरपालिकाले ध्यान दिँदै आएको छ । उच्च मावि, मावि र मदरसामा छात्रवृत्ति लगायत कार्यमा सहयोग गरेका छौं । विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य कार्यमा पनि नगरपालिकाले सहयोग छ । कार्यालयमा आएका सेवग्राहीलाई सहज र सरल तरीकाले सेवा दिने उद्देश्यले अनलाइन प्रणालीबाट काम हुँदै आएको छ । अस्पतालको औषधि लगायत व्यवस्थापन तथा खेलकुदको क्षेत्रमा काम भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा समग्रमा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन् ।
स्थानीय तहका जिम्मेवारी धेरै छन् । तर कार्यसम्पादनका लागि कर्मचारीको कमी छ । कर्मचारी अपुग हुँदा अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं । ३ जना वडा सचिवले ९ ओटा वडा कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । वडा मात्र नभई नगरपालिकामा पनि कर्मचारीको अभाव छ, जसका कारण विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । कर्मचारी समायोजनका कारण कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुने र सम्पन्न योजनाको भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त भएमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन । तर समस्याको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारी समायोजन र अभाव नै हो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमै नगरपालिकाले जोड दिएको छ । एकै प्रकारको शिक्षा अवलम्बन गर्ने योजना अनुसार अंग्रेजी माध्यमबाट सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको शुरुआत समेत भएको छ । आगामी दिनमा यसले नगरको शिक्षामा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छौं । शैक्षिक भ्रमण, दिवा खाजा जस्ता कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण समेत बढाएको छ । छात्रालाई साइकल वितरण कार्यक्रमले विद्यालयमा छात्राको उपस्थिति बढेको छ । अर्कोतर्फ, दलित तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा विद्यालय पोशाक वितरण कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महŒव दिएको छ । स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने र पर्याप्त औषधिको व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । त्यस्तै ग्रामीण भेगका हरेक गाउँमा आगामी २ वर्षभित्र सडक कालोपत्र गर्ने र यहाँ उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण सहज बनाउने लक्ष्य छ । यसले नगरवासीको आयस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौं ।
नगरपालिकाले चक्रपथ सडकको अवधारणा लिएको छ । हरेक नगरपालिकासँग जोडिएको सडकलाई कालोपत्र गर्ने योजना छ । सोही अनुसार सडक कालोपत्रको काम शुरू भएको छ । आगामी दिनमा यसलाई पूरा गर्ने लक्ष्य छ । गाउँ गाउँका सडकलाई प्रमुख राजमार्गसँग जोड्ने योजना छ । करीब ५० प्रतिशत सडकको काम सकिएको छ भने आगामी २ वर्षभित्र सबै पूरा हुने अपेक्षा गरेका छौं । तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गराउनेतर्फ नगरपालिका अग्रसर छ । कर्मचारी समायोजन तथा अन्य विविध कारण तोकिएको समयमा योजना तथा विकास निर्माणको काम हुन नसकेको अवस्था छ । यद्यपि
समस्या र चुनौतीका बीच काम सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध छौं । नगरपालिकाको कर सम्बन्धी स्थानीयको भनाइ के छ ?
साविक गाविस हुँदाको करमै नगरपालिकाले केही परिमार्जन गरेको हो । तर नगरवासीलाई करको भार थपिदिएको छैन । नागरिक बडापत्रमा सेवा बापतको दस्तुर वा कर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारको नीतिका कारण नगरवासी दोहोरो करको मारमा भने छन् । मालपोत कार्यालयले जमीन खरीदकर्ता र विक्रेता दुवैसँग कर लिने गरेको छ । जमीन खरीदकर्तासँग कर लिनु स्वाभाविक हो, तर गाउँघरमा आपत्कालीन अवस्थामै जमीन विक्री गरिने हुँदा यो उचित होइन भन्ने लाग्छ । त्यसैले यसको विरोधमा नगरपालिका छ ।
पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाका योजना के के छन् ?
नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा प्रशस्त छन् । वनजंगल, नदीनाला र पर्यटन विकासको पनि ठूलो सम्भावना छ । नदीले वर्षेनि क्षति पु¥याउने गरे पनि यसले फाइदा पनि गरेको छ । क्षति न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्दै बाग्मती लगायत नदी व्यवस्थित गर्ने सके आन्तरिक पर्यटक बढ्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, वनजंगल र सिमसार क्षेत्र पनि रहेकाले वन्यजन्तु संरक्षणमा जोड दिएका छौं । गतवर्ष सिमसार क्षेत्रमा केही काम भए पनि आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित गर्दै लैजाने योजनामा नगरपालिका छ । यहाँ हरिण, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु अवलोकनका लागि पनि पर्यटक आउने विश्वास लिएका छौं । सोही अनुसार पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा काम पनि गरेका छौं । यसको विकासमा नगरपालिकाले पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।
राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाले राजनीतिक दल तथा नेतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विकासका मुद्दामा उनीहरूको पनि आवश्यकता पर्ने भएकाले सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौं । संघ र प्रदेशको बजेटमै स्थानीय तह निर्भर रहने गर्छ । त्यहाँका बजेट नगरसम्म ल्याउन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । समग्र नगर विकासमा सबैको साथ आवश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा चौतर्फी सहयोगको अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको छ । समुन्नत र समृद्ध नगर बनाउने दायित्व सबैको भएकाले यस अभियानमा साथ दिन समेत नगरवासीमा अनुरोध गर्दछु ।
अर्थशास्त्रको पाठ्यपुस्तक लेखनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ[२०७६ माघ, ८]
विद्युत्, सडक र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएका छौं[२०७६ माघ, २]
कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा बृहत् योजना ल्याएका छौं[२०७६ पौष, २९]
नियमनको कडाइले आम्दानीमा चुनौती भएको छ[२०७६ पौष, २८]
प्रोस्टेट ग्रन्थी बढ्नु क्यान्सरको लक्षण पनि हुन सक्छ[२०७६ पौष, २५]